M / MS / MHS / MH / MX Thayipha i-Metallic Yarn
Ine-M, MX, MH, ST uhlobo .Yenziwe ngefilimu ye-PET polyester eyenziwe nge-vacuum futhi yasontwa ngemicu ehlukene .Kwenziwa i-polyester noma i-rayon .Isetshenziselwa kakhudlwana ekhompiyutha kanye nezinto zokuhlobisa zobuciko, imfashini, okunye ukugqokwa.
Intambo ye-MH ye-meatllic inombala ogqoke umfaniswano onekhanyayo ecwebezelayo nekhwalithi ethembekile. Intambo efanelekile yokuhlobisa nentambo yokufekethisa yendwangu yokweluka, indwangu efekethisiwe kanye ne sweta nezinye izingubo.
Uhlobo lwentambo ye-matellic
Indwangu yohlobo lwe-M isikwa ngqo kwifilimu ye-PET polyester, inombala ogqamile, ocwebezelayo .Isetshenziselwa ukuhlanganisa izindwangu zomkhiqizo wokuhlanza, isembatho eselukiwe futhi futhi iyindwangu eluhlaza
kokwenza uhlobo lwe-ST, MX ne-MH uhlobo lwensimbi.
Uhlobo lwe-MX yohlobo lwe-matellic
Intambo yohlobo lwe-MX yohlobo lwe-matellic yenziwa ngokusonta okungu-1ply we-M uhlobo lwensimbi yensimbi nge-2ply ye-polyester noma i-nylon yarn .Isetjenziswa kabanzi ekwenziweni kwezimpawu zokuhweba izimbambo, imisebenzi yezandla, njll.
Uhlobo lwe-MH uhlobo lwe-matellic
Uhlobo lwe-MH uhlobo lwe-matellic lwenziwe ngohlobo lwe-1ply of M uhlobo lwensimbi yarntwisted nezinye izintambo ezahlukahlukene, futhi lusetshenziswa kabanzi ekusukeni kwendwangu, indwangu yokugoba, umjuluko, amashansi, amasokisi, imikhiqizo kaKhisimusi, njll.
ST uhlobo lwentambo ye-matellic
ST hlobo lwe-matellic lwenziwa ngemicu yegolide nesiliva ehlanganiswe neminye imicu. Inemibala ehlukahlukene ne-luster enhle, esetshenziselwa kakhulu ukufekethisa
Uhlobo Ukucaciswa Ukubunjwa Amamitha (m / kg)
Silver igolide / umbala
M 12μ * 1 / 69 " I-100% yensimbi yensimbi 147,000 130,000
12μ * 1 / 100 " I-100% yensimbi yensimbi 218,000 192,000
23μ * 1 / 69 " I-100% yensimbi yensimbi 75,000 69,000
23μ * 1 / 100 " I-100% yensimbi yensimbi 111,000 103,000
I-MS (ST) 12μ * 1 / 69 " I-33% yensimbi yensimbi 42,000 40,000
I-67% 150D i-polyester
MHS 12μ * 1 / 100 " I-25% yensimbi yensimbi 47,000 45,000
I-75% 150D i-polyester
MH 12μ * 1 / 100 " I-36% yensimbi yensimbi 78,000 75,000
I-64% 150D i-polyester
MX 23μ * 1 / 100 " I-57% yensimbi yensimbi 65,000 63,000
I-43% 30D * i-polyester ye-2
12μ * 1 / 100 " I-45% yensimbi yensimbi 91,000 89,000
55% 20D * I-polyester ye-2 (inayiloni)
MH uhlobo lwenyiloni noma i-polyester noma intambo ye-radiyon yensimbi
ST hlobo lwensimbi
M Uhlobo lwe-100% I-Metallic Yarn
Uhlobo lwe-MHS 75% 150D I-Polyester 25% Insimbi yensimbi
Uhlobo lwe-MX Type Metallic Yarn